Mibvunzo - FAQ - Haining Chengda Machinery Co., Ltd.
Zvemuchina, iyo yekutungamira nguva ingangoita mazuva 25-35 mushure mekugamuchira iyo dhipoziti kubhadhara. Nguva dzinotungamira dzinoshanda kana (1) tagamuchira dhipoziti yako, uye (2) tine mvumo yako yekupedzisira yezvigadzirwa zvako. Kana yedu yekutungamira nguva isingashande neyako nguva yekupedzisira, ndapota enda pamusoro pezvaunoda nekutengesa kwako. Muzviitiko zvese isu tichaedza kugadzirisa zvaunoda. Kazhinji tinokwanisa kuzviita.
Hongu, isu nguva dzose kushandisa yepamusoro ekisipoti kavha, zvakare anogona kurongedza maererano yenyu inokosha chinodiwa. Nyanzvi kurongedza uye zvisiri-zvakajairwa kurongedza zvinodiwa zvinogona kuunza imwezve muripo.